Na nidina aza ny haavon’ny rano : sahirana ny mponina anarivony eto Antananarivo | NewsMada
Na nidina aza ny haavon’ny rano : sahirana ny mponina anarivony eto Antananarivo
Mbola nahazo fanairana mena milaza loza mitatao ny lemak’Antananarivo amin’ny fandehan’ny rano, omaly tolakandro tamin’ny 2 ora. Voakasik’izany ny kaominina eny Soalandy, Ampanefy, Soavina, Anosizato Andrefana, Ampitatafika, Ambavahaditokana, Fenoarivo, Itaosy, Ambohitrimanjaka, Fiadanana, Ampangabe. Mitohy eny Masindray, Ambohimanambola, Alasora, Ankaraobato, Tanjombato, Soavina, Anosizato Andrefana, Bemasoandro, Ankadimanga, Ambohitrimanjaka, Ampangabe, Antananarivo, Sabotsy Namehana, Ankadikely Ilafy, Ambohibao Antehiroka, Talatamaty ary Iarinarivo, araka ny fanambarana nalefan’ny Apipa. 3,95m ny haavon’Ikopa eo Bevomanga, niakatra ny rano tao anatin’ny ora efatra ary mbola hiakatra mandritra ny 12 ora manaraka. 4 m ny refy fanairana mavo milaza loza manambana eo Bevomanga. 4,65 m kosa Ikopa eny Ambohimanambola, nidina ny rano tao anatin’ny ora efatra ary hitohy ny fidinany mandritra ny 12 ora manaraka. Ho an’ny reniranon’i Sisaony, mbola mitoetra ny fanairana mena milaza loza mitatao amin’ireo faritra rehetra lalovany. Nidina ny haavony eo Andramasina sy Ampitatafika. Nidina toy izany koa ny haavon’Imamba eo Ambohidroa tao anatin’ny ora efatra.
Na efa nidina avokoa aza ny haavon’ny renirano telo ankoatra an’Ikopa eny Bevomanga, mbola manentana ny mponina eny amin’ny faritra iva hiala amin’ny fonenany ary hamonjy toerana avo ny tomponandraikitra isorohana ny loza.
Niakatra be Ikopa eny Alasora sy Ambohimanambola
Nilaza ny ben’ny Tanànan’Alasora fa miakatra be ny ranon’Ikopa mandalo eny nandritra ny roa andro. Toe-javatra mbola tsy fahita hatramin’izay izany. Manentana ny tomponandraikitra ny tenany hijery ny olana hisorohana ny fihoaran’ny renirano amin’ny lalany. Maro tsy tambo isaina ny olona ho lasa traboina raha miseho izay. Nilaza izy ny fianakaviana amin’ny toerana iva nahina efa nentanina sy napetraka amin’ny faritra avoavo. Tsy ny kaominina Alasora irery no voakasiky ny tondradrano raha vaky ny fefiloha fa mponina marobe.
Eny amin’ny kaominina Ampitatafika, niakatra koa ny rano ka mahatratra 1 200 ny olona traboina. “Nafindra toerana eny amin’ny sekoly manodidina izy ireo ka milamina ny fandraisana fa nanahirana indray ny sakafo”, hoy ny tomponandraikitra. Nangataka “vedette” haingam-pandeha ny ben’ny Tanàna hamindrana ireo mbola tavela ao fa tsy nahazo.
Nisondrotra koa ny rano teny avaradrano toy ny teny Ambohimangakely ka sahirana ireo mponina teny amin’ny faritra iva.
Teto an-dRenivohitra, nitaraina ny mponina teny amin’nty fokontany ilanivato sy ny manodidina fa dibodrano ny arabe mirefy eo amin’ny 100m, voatery mandeha lakana na sarety ny mpianatra hamonjy fianarana omaly. Raha hoeny amin’ny toeram-pivarotana lehibe na ireo birao maromaro miorina eny Tanjombato, 200 Ar isan’olona ny saran’ny sarety miampita avy eo amin’ny tetezana eo Tanjombato. Ny lakana kosa 100 Ar ny olona iray.
Nanambara ny tale jeneralin’ny Apipa, Rateloson Philippe fa efa mikarakara ny fefiloha vaky eny Ambohitrimanjaka ny tomponandraikitra. Voavonjy koa ny fefiloha teny Bemasoandro Itaosy toy izany koa ny lalana rary vato teny Ampasika nahina hoentin’ny rano.